Na Nzuzo Agha Nzuzo mbanye anataghị ikike ats Ndị aghụghọ, Aimbot, ESP, Wallhack - Gamepron
HUSH Oku nke Ọrụ Black Ops: Cold War Hack
Ọ dịghị mkpa ichegbu onwe gị banyere onye ị na-alụ ọgụ ọzọ, n'ihi na Cold Cold Hush ga-edozi ihe.
Nweta ike niile dị na GamePron - Purzụta Ngwaahịa ụbọchị 1 taa!
Mgbe ụfọdụ ị chọrọ karịa naanị otu ụbọchị - Purzụta Ngwaahịa izu 1 taa!
Edebere nke a maka ndị ọrụ anyị raara onwe ha nye gburugburu - Zụta ihe dị mkpa ọnwa 1 taa!
Gini mere ị ga - eji nye ndị iro gị ohere ọ bụla? Rụọ ọrụ Cold War Hush ma chịkwaa na uche!
Okporoko Black Ops: Cold War Hush Hack Information
COD Black Ops: Agha Nzuzo bụ oku na-esote nnukwu ibu ọrụ nke anyị matara. Site na mbipụta niile a na-eme kwa afọ, a ga-enwerịrị ụfọdụ "ihe efu" mgbe ọ bịara na aha a; daalụ, nke ahụ abụghị ikpe n'oge a. Can nwere ike melite ahụmịhe gị karịa ịnweta ohere ịnweta anyị COD Black Ops: Cold War Hush Hack na-ebibi asọmpi gị! Chọrọ ịchị dị elu ruo ogologo oge o kwere mee (ọ bụ naanị ihe okike), na Nzuzo Cold War Hush mbanye ga-enyere gị aka imezu nke ahụ.
Ejiri onye ọrụ a jiri mbanye anataghị ikike a, ebe ọ bụ na ihe kachasị amasị gị na Visual na Aimbot na-egosi. You'll ga-ahụ nhọrọ dịka Iro ESP na Ama, yana Viscks Checks, dị ugbu a na ngwa ọrụ a, mana nke ahụ bụ mmalite!
Ebumnuche Ebumnuche (ọ bụrụ na ọkpụkpụ ahụ anaghị ahụ anya, ebumnuche ebumnuche ahụ ga-eme ka anyị nwee ike ịchọta ọkpụkpụ ọzọ)
Igbu oge mods
Nhọrọ zombie mod
ndakọrịta na ọnọdụ zombie
Banyere koodu COD Black Ops: Cold War Hush Hack
Nwere ike iji anyị COD Black Ops: Cold War Hush Hack iji mezuo ihe ọ bụla ịchọrọ mgbe ị na-egwu egwu, ebe ị nwere ike na ngwaọrụ ndị ọ bụla na-egwu egwu na-eche na ọ ga-ekwe omume. Ndị aghụghọ bụ iyi àmà na ike ga-eji mgbe ị na-nkwanye ndụ, na ọ bụkwa ihe ndị kasị pụrụ ịdabere na Mpụga mbanye anataghị ikike na ahịa ugbu a. Ọ dị mfe ma kwụ ọtọ iji ya, ọbụnakwa na-abịa yana HWID Spoofer maka ndị gị na-emeburu mmachibido iwu! Ọ bụrụhaala na ị dị njikere imeghari gị gburugburu na ịgbanwe gị mbanye anataghị ikike ntọala na uche, ọ dịghị onye nwere ike ịkwụsị gị.
Gini mere eji eji COD Black Ops: Cold War Hush na ndi ozo?
Ndị ọzọ na-enye ọrụ enweghị ike ileba anya na ahụmịhe hacking gị, nke bụ nnukwu nsogbu nye ndị ọrụ na-etinye ego ha tara ahụhụ na ngwaọrụ ndị a. Enwere ọtụtụ ndị nwere mmasị na hacks ndị na-enwetụbeghị usoro ahụ n'onwe ha, nke ahụ nwere ike ime ka echiche ahụ yie ka ọ dị ntakịrị. Ọ bụghị naanị na ị ga-enwe ike iji hacks anyị enweghị mgba ọ bụla, mana anyị na-enyekwa ndị ọrụ anyị ohere iji nweta atụmatụ kacha mma ego nwere ike ịzụta. Mgbe ịchọrọ ịnọ n'ihu asọmpi ahụ, na-eji COD Black Ops: Cold War Hush Hack ga-enwe azụ gị mgbe niile.
Ndị ọrụ ebe a na GamePron nwere ike ị rejoiceụrị ọ rejoiceụ, ebe anyị nyere ha ohere ịnweta menu egwuregwu dị egwu nke na-enye ha ohere ịhazi ahụmịhe hacking dị ka o kwere mee. Kwesighi ịdabere na ntọala ụlọ ọrụ iji rụọ ọrụ ahụ ọzọ, ebe ị nwere ike iji menu egwuregwu mee ka atụmatụ nke ọrụ ịchọrọ ịnọ na-arụ. Nọgide na-eji aghụghọ eji ụzọ aghụghọ gị abanye ma chekwaa menu egwuregwu anyị, achọtara naanị ebe a na GamePron! Enweghị ikike ịgbanwe gị mbanye anataghị ikike ntọala na ijiji, ị na-aghaghị na-abịa gafee a ole na ole ọrụ ndị na-enweghị nsogbu na-akọkwara gị maka ịghọ aghụghọ ule. Mgbe i zochiri nke ahụ, ọ bụ mgbe ahụ ka ị ga - amalite ịchị!
Q5. Ndi aghụghọ na-arụ ọrụ na Warzone mode?
Zụta igodo ngwaahịa taa ma nweta ohere mbanye anataghị ikike Nzuzo # 1 achọtara na ntanetị. Enweghị oge ichere!
Njikere Na-achị na anyị ngwa BO Hush mbanye anataghị ikike?